Lioka 10 - Ny Baiboly
Lioka toko 10
Ny mpianatra 72 lahy - Ny nientanan'i Jesoa tamin'ny Fanahy Masina - Ilay Samaritana tsara fanahy - Marta sy Maria.
1Nony afaka izany dia nifidy roa amby fitopolo lahy hafa koa ny Tompo ka naniraka azy tsiroaroa hialoha azy, any amin'ny tanàna sy ny tany rehetra izay efa halehany. 2Ary hoy izy tamin'izy ireo: Be ny vokatra, fa ny mpijinja no vitsy; koa mangataha amin'ny tompom-bokatra mba hanirahany mpiasa hijinja ny vokany. 3Mandehana; indro aho maniraka anareo tahaka ny zanak'ondry eo afovoan'ny amboadia. 4Aza mitondra kitapom-bola na kitapo hafa, na kiraro, ary aza miarahaba olona akory any an-dàlana. 5Amin'izay trano hidiranareo, dia milazà aloha hoe: Fiadanana anie ho amin'ity trano ity; 6ka raha misy zanaky ny fiadanana ao, dia ho ao aminy ny fiadanana lazainareo; fa raha tsy misy kosa, dia hiverina aminareo ihany izany. 7Ary mitoera amin'izany trano izany, ka mihinàna sy misotroa izay misy ao, fa mendrika ny karamany ny mpiasa. Aza mifindrafindra trano.
8Ary amin'izay tanàna idiranareo, raha mandray anareo ny olona, dia hano izay atolony anareo; 9ary sitrano ny marary izay ao, ka lazao hoe: Efa mby akaiky anareo ny fanjakan'Andriamanitra. 10Fa amin'izay tanàna idiranareo kosa nefa tsy mandray anareo ny olona, dia mankanesa eny an-kianja ka lazao hoe: 11Na ny vovoky ny tanànanareo nipetaka tamin'ny tongotray aza dia ahintsanay hiampangana anareo; fantaro anefa fa efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. 12Lazaiko aminareo fa amin'izay andro izay, dia ho moramora kokoa ny ho amin'i Sodoma, noho ny ho amin'izany tanàna izany. 13Loza ho anao ry Korozaïna, loza ho anao, ry Betsaida! fa raha izay no natao tany Tira sy Sidòna ny fahagagana natao taminareo, dia ela no ho efa nibebahany tamin'ny akanjo malailay sy tamin'ny lavenona. 14Noho izany, amin'ny andro fitsarana dia ho moramora kokoa ny ho amin'i Tira sy Sidòna noho ny ho aminareo. 15Ary hianao, ry Kafarnaoma izay misondrotra hanakatra ny lanitra dia haetry hatrany amin'ny afobe hianao. 16Izay mihaino anareo mihaino ahy, ary izay manamavo anareo manamavo ahy; izay manamavo ahy anefa dia manamavo izay naniraka ahy.
17Ary niverina tamin-kafaliana ny roa amby fitopolo lahy ka nanao hoe: Tompo ô, na dia ny demony aza dia manaiky anay noho ny anaranao. 18Dia hoy Jesoa taminy: Nahita an'i Satana latsaka avy tany an-danitra toy ny varatra aho. 19Indro efa nomeko ny fahefana hanitsaka ny bibilava sy ny maingoka mbamin'ny hery rehetra ananan'ny fahavalo hianareo, ka tsy hisy hampaninona anareo akory ireny. 20Tsy noho ny fanahy ratsy manaiky anareo anefa no tokony hifalianareo, fa noho ny anaranareo efa voasoratra any an-danitra no ifalio.
21Tamin'izay nientan-kafaliana tamin'ny Fanahy Masina izy ka nanao hoe: Misaotra anao aho, ry Raiko, Tompon'ny lanitra sy ny tany, noho hianao nanafina izany tamin'ny mahay sy ny hendry, fa nanambara azy tamin'ny zaza madinika kosa. Eny, Raiko, fa izany no sitra-ponao. 22Efa nomen'ny Raiko ahy ny zavatra rehetra, ary tsy misy mahalala ny Zanaka afa-tsy ny Ray, na ny Ray afa-tsy ny Zanaka sy izay tian'ny Zanaka hanambarana azy. 23Dia nitodika tamin'ny mpianany izy ka nilaza taminy manokana hoe: Sambatra ny maso mahita izay hitanareo; 24fa lazaiko aminareo fa maro ny mpaminany sy ny mpanjaka naniry hahita izay hitanareo, fa tsy nahita, ary handre izay renareo, fa tsy nandre.
25Ary indro mpampiana-dalàna anankiray nitsangana haka fanahy azy ka nanao hoe: Tompo ô, inona no hataoko hahazoako ny fiainana mandrakizay? 26Dia hoy Jesoa taminy: Inona no voasoratra ao amin'ny Lalàna ary ahoana no famakinao azy? 27Ary namaly izy ka nanao hoe: Tiavo ny Tompo Andriamanitrao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra, sy ny herinao rehetra, ary ny sainao rehetra, ary ny namanao tahaka ny tenanao. 28Dia hoy Jesoa taminy: Marina ny navalinao, manaova izany dia ho velona hianao. 29Fa nitady hanamarin-tena ralehilahy ka nanao tamin'i Jesoa hoe: Iza àry no namako? 30Ary hoy Jesoa taminy:
Nisy lehilahy anankiray nidina avy tany Jerosalema ho any Jerikao, azon'ny jiolahy, ka nendahany ny lambany, nokapohiny ny tenany ary saika maty vao navelany. 31Dia nisy kosa mpisorona anankiray nidina tamin'izany làlana izany ka nahita azy, nefa nandalo ihany. 32Toy izany koa ity levita anankiray izay tonga teo, nahita azy, nefa nandalo ihany. 33Fa nisy kosa Samaritana anankiray nivahiny tonga teo aminy, ka nangoraka nony nahita azy. 34Nanatona azy izy, dia namehy ny feriny ary nanisy diloilo sy divay azy, vao nampitaingina azy ny soavaliny, sy nitondra azy tany an-tranom-bahiny ka nitsabo azy. 35Nony ampitso, dia naka denie roa izy ka nomeny ny tompon-trano, ary nataony hoe: Tsaboy izy, ary na hoatrinona na hoatrinona laninao mihoatra noho ireny, dia honerako rahefa miverina aho. 36Iza amin'izy telo lahy no ataonao ho naman'ilay azon'ny jiolahy? 37Dia hoy ilay mpampiana-dalàna: Ilay niantra azy. Mandehana àry, hoy Jesoa taminy, ka manaova toy izany koa.
38Raha mbola nandeha izy ireo dia niditra tamin'ny vohitra anankiray Jesoa, ary nisy vehivavy atao hoe Marta nandray azy tao an-tranony. 39Nanan-drahavavy anankiray atao hoe Maria izy, izay nipetraka teo anilan'ny tongotry ny Tompo nihaino ny teniny; 40fa Marta kosa sahirana tamin'ny fanompoana be. Dia niato kely izy ka nanao hoe: Tompoko, tsy mampaninona anao va ny amelan'ny rahavaviko ahy hanompo irery? Mba asaovy manampy ahy re izy. 41Fa namaly ny Tompo ka nanao taminy hoe: Marta, Marta, maro tadiavina sy be tebiteby hianao, 42nefa zavatra iray monja no ilaina; fa Maria no nifidy ny anjara tsara indrindra izay tsy halana aminy. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.0163 seconds